के बजार ओरालो लाग्ने दिन सकिएकै हो त ? बिहीबार पनि १५ अंकले बढ्यो नेप्से – BikashNews
के बजार ओरालो लाग्ने दिन सकिएकै हो त ? बिहीबार पनि १५ अंकले बढ्यो नेप्से
२०७६ वैशाख ५ गते १५:५४ विकासन्युज
काठमाडौं । नयाँ वर्ष शुरु भएयता सेयर बजारले नयाँ गति लिएको छ । गत वर्षको अन्तिम दिन अर्थात चैत २८ गते ११८४.०१ अंकमा रहेको नेप्से एकसातामै निरन्तर बढेर १२३२.२६ अंकमा पुगेको छ ।
वैशाख २ गते सोमबारदेखि ५ गते बिहीबारसम्म कारोबार भएको बजारमा नेप्से ४८.२२ अंकले बढेको छ । गत सोमबार नेप्से ११८३ अंकदेखि कारोबार शुरु भएको थियो । साताको अन्तिम कारोबार बिहीबारसम्म नेप्से परिसूचक निरन्तर बढेर हाल १२३२.२६ अंकमा आईपुगेको छ ।
पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । बिहीबार कुल १६५ कम्पनीको ७५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको कारोबारमा पनि निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । बिहीबार सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
सेयर बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तिदैँ गएपछि लगानीकर्ताहरु कम्पनीहरुको सेयरमा आकर्षित देखिएका हुन् । साथै, बजारमा तरलताको समस्या कम हुँदै गएको र बैंक ब्याजदर घटिरहेकोले सेयर बजारमा उछाल आएको हो ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमाइ र कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै गएकाले नेप्सेमा थप सुधार हुने सेयर विज्ञहरु बताउँछन् ।